ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Read More လုပ်နည်းအလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းသုံးမျိုး
Read More လုပ်နည်းအလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းသုံးမျိုး
ဒီ Post ကို တင်စရာမလိုဘူးလို့ ထင်ထားတာပါဗျာ။ ဒါပေမ ယ့် Ko Htun Linn က Post
တော်တော်များများမှာ Comment ၀င်ရေးပြီး တင်ပေးပါလို့ တောင်းထားလို့ Ko Htun Linn အပါအ၀င်
ဒီနည်းလမ်းကို မသိသေးသော သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ အသုံးပြုနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း နားလည်နေသူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဆရာသမားတွေကို လိုက်မေးပြီး
ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ အဆင်ပြေနေတာပါ။ တက်ယောင်ကန်းပေါ့ဗျာ။ ဒီနည်းလမ်းကလည်း ညီကိုလိုလည်းနေ
တဲ့ ကိုအေးလွင်ကြီး သင်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။
နည်းလမ်း2နဲ့3ကပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 1 Design > Edit HTML > Expand Widget Templates မှာအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အဆင့်2Ctrl + F ကိုနှိပ်ပြီး ဒီကုတ်လေးကိုရှာပါ </head>
အဆင့်3တွေ့ပြီဆိုရင် </head> ရဲ့အောက်မှာအောက်က Code ကို ကူးထည့်ပေးပါ။
အဆင့်4အရင်ဆုံး Preview နဲ့အရင်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပြီဆိုမှ Save နှိပ်ပေးပါ။
အောက်က Code ကိုထပ်ရှာပါ၊
တွေ့ပြီဆိုရင်အောက်က Code နဲ့အစားထိုးပေးလိုက်ပါ။။
<span style='padding-top:5px;;float:right;text-align:right;'><a expr:href='data:post.url' rel='bookmark'><b>>>>ဆက်ဖတ်ရန်>>> >></b></a></span>
အဲဒီကုဒ်ကိုရှာလိုက်ပါ တွေ့ပြီဆိုရင် အောက်က ကုတ်နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။
<img src=" ဒီနေရာမှာ ပုံရဲ့ Link ကိုထည့်ပေးပါ။ " border="0" alt="Read Full Post" />
1.dashboard--> layout- -> Edit HTML
2."Expand Widget Templates" မှာအမှန်ခြစ်
3."Read More" ဆိုတာကိုရှာ
Note: ဒီနေရာမှာကိုယ်ဆိုဒ်မှာထည့်ထားတာကှိုရှာပေါ့ဗျာ ဆိုဒ်မှာထည့်ထားတာက ဆက်ဖတ်မယ် လို့ထည့်ထားပြီး Read More ဆိုတာလိုက်ရှာရင်တော့ မရှိဘူးပေါ့
<img src='ဒီနေရာမှာ ပုံရဲ့ Link ကိုထည့်ပါ'/>
ဒီလောက်ဆိုဗျာ Ko Htun Linn လည်း အဆင်ပြေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ အကြောင်းလေးတော့ ကြား
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:04 PM
Ko Htun Linn September 18, 2012 at 4:16 AM
ကိုပြည့်ဖြိုရေ no (1)နှင့်blogav့ လေးပြီးမတက်လို့ပြန်ဖျက်ရပါတယ်။ N0 (2) / No (3) က ဒီအတိုင်းရှာမရ ။Expand Widget template ကိုအမှန်ခြစ်တော့လည်းမရပါ။
ကျွန်တော်ကဘာမှမတက်သေးပါ။ mmitd မှာကိုပြည့်ဖြိုးရဲ့စာမျက်နှာမှာတွေ့ပြီးအားကျတာပါ။လေးစားပါတယ်။အခိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ပါ။နတ်တလင်းမြို့နဲ့ (၁၀)
မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောမြို့ကလေးမှာနေတာပါ။ ပညာမနည်းရှာနေရပါတယ်။ menuလည်းမရပါ။အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Template Design ကိုလည်းမကြိုက်ဘဲရရာသုံးရတာပါ။
ကိုပြည့်ဖြိုးလို3colum Template လှလှလေးလိုချင်လို့ပါ။ blogger deshboard ပေးထားပါမယ်းကျေးဇူးပြုပြီးအချိန်ရရင်ဝင်ပြင်ပေးပါ။
Ko Htun Linn September 18, 2012 at 4:22 AM
Pyae Phyo (MMiTD) September 18, 2012 at 4:24 AM
ကိုထွန်းလင်းရေ Read More အလွယ်ဆုံးကတော့ Post တင်ရင် Post Titel အောက်က Link , Insert Image တို့ဘေးနားက Insert Jump Break ကိုနှိပ်လိုက်ဗျာ။ ကိုယ် Read More လုပ်ချင်တဲ့နေရာကနေစပြီး Cursor ချပြီး Insert Jump Break ကိုနှိပ်လိုက်ဗျာ။ အဲဒါပြီးလို့ ပုံနဲ့အစားထိုးချင်၇င်တော့ အဆင့်2အတိုင်းလိုက်လုပ်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေနော်
Ko Htun Linn September 18, 2012 at 8:29 PM
Insert Jump Break နှိပ်တာအဆင်ပြေပါပြီ။ ko pyae phyoe ရေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။အခုလိုတကူးတကရှင်းပြပေးတာ။နောင်မသိတာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးပါနော်။ကိုပြည့်ဖြိုးရဲ့postတွေကိုအမြဲအားပေးနေပါတယ်။ဆက်ပြီးလည်း Blog နည်းပညာတွေများများရေးနိုင်ပါစေ။လေးစားလျှက်
Kaspersky Activation Keys For (29.9.12)
Media Player Classic v1.2 For Android
Xilisoft Video Converter Ultimate 7.5.0 + Patch
Adobe Photoshop Touch v1.3.0 For Android
Attractive Drop Down Menubar For Blogger
PC မှာ Righ Click နှိပ်ရင် ပေါ်လာတဲ့ပုံစံပြောင်းမယ်...
TuneUp Utilities 2013 v13.0.2020.14 + Patch
Zuma's Revenge Full + Cracked Version / 97 MB
Microsoft Office 2007 Portable Registered Version ...
Paretologic PC Health Advisor v3.1.3.0 With Crack
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၂၄.၉.၁၂) အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၇)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-71 (24.9.12)
(26-Sept-2012) ထုတ် အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၂၁ Digital Lif...
Desktop ကိုအလှဆင်ဖို့အတွက် Object Dock Plus-v201
စာရင်းကိုင် ၃ဦး အမြန်အလိုရှိသည်
Advanced Download Manager v.1.3.6
Auto CAD 2012 Full Version
Blog Page ကို ခဏလေး အမှောင်ချထားမယ်။
Norton Antivirus 2013 Full Version With Trial Rese...
AVG PC Tuneup 2013 12.0.4000.108 + Crack and Seria...
Colourful Attractive Slate CSS Menu Menu Bar
Kingsoft Antivirus 2012 (Full Version)
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၇.၉.၁၂) အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၆)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-70 (17.9.12)
(19-Sept-2012) ထုတ် အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၂၀ Digital Lif...
AVG Internet Security 2013 + Serial (Valid until S...
မိမိ Blog မှာ Drop Down Menu လေးတစ်ခု ဖန်တီးကြည့်ရ...
Jelly Bean Skin For Window-7
Blog မှာ Mouse Cursor အလန်းလေးတွေထားကြည့်ရအောင်
Kaspersky Activation Keys For (11.9.12) & Key ထည့်...
ယခုအပါတ်ထုတ် အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၁၉ Digital Life Journ...
Super Ram 6.9.3.2012 + Patch
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-69
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၀.၉.၁၂) အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၅)
DX Toolbox v 2.7.0 For Android
အရမ်းမြန်ပြီး အရမ်းလန်းတဲ့ Wyzo Web Browser အသစ်လေ...
Walking Spider3D Screensaver + Serial
DFX Audio Enhancer 11.016 + Keygen
Windows 8 Activate All Versions
Viber ကို PC မှာ သုံးလို့ရပြီ
Big Fish Games - Brain Games - Chess
ESET NOD32 Antivirus 6.0.115.0 + Product Activatio...
အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၃၄) (၃.၉.၂၀၁၂)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-68 (3.9.12)
CCleaner Professional & Business Edition 3.22.1800...